Iphone Ratidza, Iphone Screen, Iphone Zvikamu - TC
Yakaomeswa oled skrini kutsiva kwe iPhone XS MAX
Incell lcd kutsiva kweiyo iPhone 11
Incell lcd kutsiva kweiyo iPhone 11 pro
Incell lcd kutsiva kwe iPhone 11 Pro Max
Incell lcd kutsiva kwe iPhone XR
LCD skrini yekutsiva ye iPhone 6G
LCD skrini yekutsiva ye iPhone 6P
LCD skrini yekutsiva ye iPhone 6S
LCD skrini yekutsiva ye iPhone 6SP
LCD skrini yekutsiva ye iPhone 7G
LCD skrini yekutsiva ye iPhone 7P
LCD skrini yekutsiva ye iPhone 8G
LCD skrini yekutsiva ye iPhone 8P
TC inyanzvi tekinoroji bhizinesi rinoshanda muR & D, kugadzirwa uye kutengesa kweLCD & OLED kuratidza skrini mbozhanhare. Iko parizvino ndeimwe yevanogadzira makuru ekuratidzira skrini mumusika wefoni nharembozha muChina.
TC ine vashandi vanopfuura mazana mashanu uye vanopfuura zviuru zvishanu zvemamirimita mita nzvimbo dzemusangano izvozvi, ese iwo asina guruva, anodziya nguva dzose uye mashopu emumisangano, kusanganisira anodarika chiuru mita metres zana kirasi isina isina guruva.
Iyo kambani ine yakasimba tekinoroji uye manejimendi timu, kusanganisira anopfuura makumi maviri maR & D timu nhengo, kune vanopfuura makumi mashanu mainjiniya ekugadzirisa, zvishandiso uye mhando.
Unoziva here kana iyo yekutanga skrini ichitsiviwa kana repai ...
Kazhinji, isu tinowanzo sangana nemamiriro ekuti mbozhanhare mbozha yakaputswa netsaona, mamwe makesi akavhunika girazi rinovhara, mamwe ndiwo emukati skrini haaratidze zvakare aputswa. The th ...
Iwe unoziva kukura kwefoni mbozha? Chaizvoizvo ch ...
BPM Era Kutaura nezve ichi chigadzirwa, vamwe vanhu vanofanira kunge vakazviona. Muchokwadi, tichinyatso kutaura, ichi chigadzirwa hachigone kunzi nhare mbozha. Ichi chishandiso chakatanga kuoneka muzana ramakumi maviri, whe ...
Mushure meyero yenharembozha yekuratidzira skrini, wher ...
Saizi yakagara iri yakakosha nzira mukuvandudzika kwenhare mbozha skrini, asi nhare mbozha ine inopfuura 6.5 inches haina kukodzera ruoko rumwe chete rwakabata. Naizvozvo, hazvina kusiyana ...
Nei chidzitiro chakanyanya kutarisana pasi kana nharembozha ...
Rega ndikubvunze mubvunzo kutanga Nharembozha inowanzoiswa patafura painenge isiri kushandiswa, Unoisa screen kumusoro kana sikirini pasi? Asi iwe unoziva chii? Isa nharembozha ...
Nguva dzose inoisa mhando pakutanga uye kunyatso tarisa chigadzirwa chigadzirwa chese maitiro
TC inoshandisa yakasimba sisitimu manejimendi manejimendi, yakahwina iyo trust uye kurumbidza kubva kune vatengi vane epamberi yekugadzira tekinoroji, yakanaka chigadzirwa chigadzirwa uye hunyanzvi sevhisi
TC ine vashandi vanopfuura mazana mashanu uye anopfuura zviuru zvishanu zvemamirimita metres nzvimbo dzemusangano izvozvi, ese iwo asina guruva, anodziya nguva dzose uye mashopu emumisangano, kusanganisira anodarika chiuru mita metres zana kirasi isina isina guruva.
Zvigadzirwa zvinopisa, Sitemap, AMP Mobile